AmaVenture Capitalists akhukulise imali kwiCrypto Space ngo-2021 | Klever ezezimali
AmaVenture Capitalists akhukulise imali kwiCrypto Space ngo-2021
Ixabiso lemarike ye-cryptocurrency lilonke lifikelele kwi-3 yeebhiliyoni zeedola ngo-2021, ngokwengxelo yePitchBook Data.
Ukonyuka kwemarike yemali yeza njengoko imali eyinkunzi yemali kwilizwe jikelele ityale imali emalunga ne-30 yeebhiliyoni zeedola kwi-cryptocurrency ngo-2021.
Oongxowankulu bamashishini abatyala imali kwisiqalo sabathengi babhala iitshekhi ezininzi kwiinkampani ze-crypto kunangaphambili. Izivumelwano zigxininisa indlela itekhnoloji ye-blockchain elungisa ngayo amashishini afana nemidlalo kunye ne-e-commerce, kunye ne-inshurensi etyhala abatyali-mali abathengi ekudala bemile ukuba bazenze kwakhona njengabaxhasi be-crypto. Abatyali-mali bagalele i-3.7 yeebhiliyoni zeedola kwimidlalo esekwe kwi-cryptocurrency-based, urhwebo, kunye nokuqaliswa kokuthenga kulo nyaka, kubandakanywa indawo yentengiso ye-non-fungible i-OpenSea.
Ishishini le-cryptocurrency lisekwisiqalo, kwaye kukho indawo engapheliyo yokukhula. Iifemu ezininzi zeVC ziyazi ukuba ikamva lele-crypto, kwaye abafuni kuphoswa koko kusenokuba lelona thuba likhulu lotyalo-mali kwixesha lethu.
Nangona kunjalo, imarike ye-crypto isaguquguquka, kodwa iifemu ze-VC ezizithembileyo kwi-blockchain kunye neenkampani ze-cryptocurrency zikulungele ukuthatha ingozi eyongezelelweyo. Nangona ijongwa njengendlela yenkxaso-mali yemveli, iimali zeVC ziya zijongeka ngakumbi kwi-crypto ngenxa yokwamkelwa okuqhelekileyo. Oku kubangelwa ngamaqonga amakhulu entengiso afana noFacebook kunye noGoogle bagqiba ekubeni bayeke ukuvala iintengiso zabo ze-crypto. Ngapha koko, ngokwamkelwa okuqhelekileyo ngabatyali-mali bamaziko, ii-VCs zijonga ishishini le-crypto njengotyalo-mali olungenabungozi kangako. Indawo ye-DeFi kunye ne-non-fungible token (NFT) yemarike yenye yezona ndawo zidumileyo kwishishini le-crypto elitsala imali ye-venture..
Iifemu eziphezulu zeVC ezityala imali kwi-blockchain kunye ne-cryptocurrency
Digital Currency Group, NGC Ventures, Coinbase Ventures, Pantera Capital, Plug and Play Tech Centre, Fenbushi Capital, Andreessen Horowitz, Lightspeed Venture Partners kunye neqela lemali yeDijithali eyenza ikhulu le-197 Blockchain kunye nezivumelwano ze-crypto kunye ne-Fenbushi Capital ene-133 Blockchain ephantsi kunye ne-crypto deals.
Iintengiselwano ezinkulu ezakhokelela ekubeni utyalo-mali lwe-crypto luchukumise i-30 yebhiliyoni zeedola -imali eyi-1 yeebhiliyoni zeerandi ephakanyiswe yi-crypto derivatives exchange FTX, i-Custodian New York Digital Investment Group iphakamisa i-1 yeebhiliyoni zeedola, umboneleli wesixhobo sokudibanisa i-blockchain, i-Forte, ivala i-$ 725. -isigidi senkxaso-mali, i-MoonPay ifumana inkxaso-mali ye-555 yezigidi zeedola, kunye neqonga le-NFT iDapper Labs ephakamisa i-350 yezigidi zeedola,
U-Coinbase uFred Ehrsam kunye nomlingani wangaphambili waseSequoia uMat Huang baye baphakamisa i-2.5 yeebhiliyoni zeedola kwiParadigm One. Igqithise ingxowa-mali ye-crypto ka-Andreessen Horowitz ukususela ekuqaleni kwalo nyaka, eyayikhulise i-2.2 yeebhiliyoni zeedola. Abaseki beParadigm babona amathokheni njengento ethembisayo yotyalo-mali olude.
Amashishini ongxowankulu eYurophu atyale irekhodi le-2.2 yeebhiliyoni zeedola kwi-crypto kunye ne-decentralized finance (DeFi) kwiinkampani ngo-2021, ngokutsho kwedatha evela kwi-Dealroom. Baxhasa iimarike zeempahla zedijithali ezifana ne-NFTs; izibonelelo zeentlawulo; ezezimali ezinatyisiweyo, iziqalo. Iqonga laseFransi eligxile kwibhola ekhatywayo ye-NFT i-Sorare yaba yi-unicorn ngo-2021 emva kokuba inyuse umjikelo wenkxaso-mali we-Series B yezigidi ezingama-680 ekhokelwa yi-conglomerate yaseJapan iSoftBank.
I-London-based crypto payments firm Ramp, esanda kunyusa i-53 yezigidi zeedola ikhokelwa yi-Balderton Capital ngokuthatha inxaxheba kubatyali-mali abakhoyo NFX, Galaxy Digital, Seedcamp, Firstminute Capital.
amaqonga otshintshiselwano Crypto CoinDCX kunye Coinswitch Kuber - iiunicorns ezimbini ezintsha ze-crypto eIndiya ziye zodwa zarhola phantse i-60% yemali eyinkunzi ephakanyiswe kulo nyaka.CoinDCX inyuse i-90 yezigidi zeedola kuMjikelo wenkxaso-mali we-Series C kwixabiso le-1.1 yeebhiliyoni zeedola, yaba yi-India yokuqala. utshintshiselwano lwe-cryptocurrency ukufumana imeko ye-unicorn phakathi kokungaqiniseki ngolawulo kwii-asethi ze-crypto.
Inkxaso-mali yayikhokelwa yi-B Capital Group, eyasekwa ngu-Facebook co-founder Eduardo Saverin. Abatyali-mali abakhoyo abanje ngeCoinbase Ventures, iPolychain Capital, Block. enye, kunye Jump Capital nayo inxaxheba kumjikelo.
Cryptocurrency exchange Coinswitch Kuber ngo-Okthobha 6 uthe inyuse phezu $260 million ekhokelwa abatyali-mali abatsha Coinbase Ventures kunye phezulu Silicon Valley fund Andreessen Horowitz (a16z), bumping up ixabiso layo izihlandlo ezine kwiinyanga ezintandathu ukuya $1.9 billion.
Izizathu zokuba oongxowankulu beVenture bagalela iibhiliyoni zeedola kwi-crypto
I-Blockchain ethile yeleja yoluntu yinto enokuthi iphazamise imarike xa isiza ekutshintsheni indlela yokuseta intlawulo yemveli esebenza njengoko intengiselwano esekwe kwi-blockchain inokuqinisekiswa nguye nabani na ukuba unokufikelela kwi-intanethi.
Ngaphandle kokuguquguquka kwexabiso, abathengisi abaphezulu bavumela abathengi ukuba bahlawule ngokusebenzisa i-Bitcoin kunye ne-Altcoins. Ngabathengi bafumana ukufikelela kwiinkonzo ezinxulumene ne-crypto-inventive kwixesha elizayo, ukwamkelwa kulindeleke kuphela ukuqhubela phambili ukusuka apha.
Ii-Cryptocurrencies kancinane zenza ukuba indawo ibe nokuzimela ngakumbi ngokusika abantu abaphakathi abalawula imali yethu esiyisebenzele nzima.
Abaphuhlisi kwihlabathi liphela banegalelo elingapheliyo kwindawo yemigodi ye-crypto, ngelixa beceba iindlela ezintsha zokwenza inkqubo ingabi namandla kakhulu ngexesha. Ukongeza koko, abadlali abatsha be-crypto babonisa usuku ngalunye ngezantya ezingcono zokuthengiselana, ukusetwa kophuhliso lwesoftware. , kunye nokukwazi ukuvelisa iibhloko ngokukhawuleza
Abatyali-mali kwihlabathi liphela batyala imali enkulu kwaye bahamba ixesha elide kwii-cryptocurrencies. Ngokwedatha ye-triple-A ukusukela ngo-2021, kuqikelelwa ukuba izinga lobunini be-crypto yehlabathi kumyinge we-3.9%, kunye nabasebenzisi abangaphezu kwezigidi ezingama-300 kwihlabathi liphela. Kwaye ngaphezulu kwe-18,000 yamashishini sele eyamkela intlawulo ye-cryptocurrency.
Omnye wabaqhubi abakhulu bokwamkelwa kwe-crypto kwihlabathi jikelele ibe ngumdla oboniswe ngabadlali abafana ne-Microstrategy kunye ne-Tesla.Tesla ithenga i-$ 1.5 yebhiliyoni kwi-bitcoin ekuqaleni kwalo nyaka ngokubamba i-42,902 Bitcoins kunye ne-MicroStrategy ngoku ibamba i-bitcoins ye-121,044, exabisa phantse i-7 yeebhiliyoni zeedola. amaxabiso angoku.
Nge-El Salvador ibe lilizwe lokuqala ukubhengeza i-Bitcoin njengethenda esemthethweni kunye noorhulumente kwihlabathi liphela bejonge ukulawula indawo.
Kwabo bakholelwa kwiinjongo zemali, i-cryptocurrency iza njengenguqu enethemba. Ukunyuka kwexabiso ecaleni, i-cryptocurrencies ethandwa kakhulu njengeBitcoin kunye ne-Ethereum ibonise ixabiso elikhulu, ikhuthaza abatyali-mali ukuba bangene kwesi sithuba, ukusuka kwindawo ebandakanya ngakumbi. U-2021 ubonakala ngathi ucebisa enye inguqu kwi-blockchain kunye ne-cryptocurrency, enokubeka obu buchwepheshe ngcono ngakumbi kunokuphakama kwabo kwangaphambili.
Kukho inyambalala yezinto ezinegalelo kutyhalo esilujongileyo ngoku. Enye yezona zinto zibalulekileyo phakathi kwazo kukwanda kokulungela ishishini, zombini ukusuka kumbono wobugcisa kunye neengcinga. Sikholelwa kwaye sicinga kumashumi eminyaka kwixesha elizayo kucace gca ukuba amaziko amakhulu emhlabeni aya kunikwa amandla ngamathokheni.
Ukuba ungumtyalomali we-crypto kwaye usathandabuza malunga nesithuba se-crypto, landela i-Venture capitalists kunye nemali enkulu.
Akukho kalo 4.56 Iivoti: 9
Ndingumbhali weendaba esekwe eIndiya Klever. Uthweswe isidanga kwiRamaiah Institute of Technology ngesidanga seBiotechnology. Usebenze njengeNjineli yekhonkco lokubonelela e-Bangalore. Ndingathanda ukuphanda iWebhu 3.0, iiCryptocurrencies, kunye nekamva elinatyisiweyo ngelixa ndisabelana nawe ngolwazi.